အစ္စတန်ဘူလ်ရှိငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် Bosphorus တံတားမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတောင်းဆိုချက် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus တံတားများတွင်ငလျင်ပျက်စီးမှုတောင်းဆိုချက်များ
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အဆိုပါ Bosphorus တံတား iddiasi မှာအစ္စတန်ဘူလ်ရှိငလျင်အပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 5.8 အခြေစိုက် Silivri အတွက်မြေငလျင် DCC အရွယ်အစားလွန်ပြီးနောက်။ ယင်းက forward İmamoğluဆန္ဒရှိအတိတ်ရဖို့ပြည်နယ်များပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများ, ငလျင်တွေ့ကြုံသူကသတိပေးခဲ့ဟုဆိုသည်။ ငလျင်, စည်းရုံးခြင်းပြဿနာİmamoğluအမှုကိုပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အမျိုးသားရေးပြဿနာအစ္စတန်ဘူလ်တှငျကြှနျုပျတို့ကနောက်ဆုံး 800 1 လအတွင်းငလျင်အပေါ်သစ်ကိုစုရုံးဧရိယာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ "အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆင်သင့်နေသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်မရှိကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိ။ ကျနော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်ပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအစ္စတန်ဘူလ်၏အလယ်ပိုင်းခရိုင်၌ရှိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အငယ်ဆုံး 500 အပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ်၏မြေမှတ်တိုင်ကိုစတုရန်းမီတာအတွက်ဒီပြဌာန်းခွင့်တကယ်အဓိကချို့ယွင်းချက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ Bosphorus တံတားİmamoğluပုံရိပ်တွေအကြောင်းကိုအမှန်တရားရောင်ပြန်ဟပ်သတိပြုကြောင့် Bosphorus တံတားအကြောင်းကိုအလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကားကြကုန်အံ့။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးထိန်းသိမ်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ တစ်ဆိပ်ခံတံတားကိစ္စများဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်ရှိပါသည်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်အတိုင်းဆိပ်ခံတံတားပြပွဲသူ၏အမြင်။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာ။ ငြမ်းကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်, ငါတို့သည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအကြောင်းကြားလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ကြောက်ရွံ့သောစိတ်အပေါ်အခြေခံပြီးအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Silivri created ပတျဝနျးကငျြမြို့ကြီးများ 5.8 အရွယ်အစားသဘာဝဘေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (DCC) တွင်ငလျင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်မှေးမှိန်။ ပထမဦးဆုံးသတင်းစာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူİmamoğluရှယ်ယာသတင်းအချက်အလက်ရရှိထား,2ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ İmamoğlu, သူ၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတွက် said:
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NO ပျောက်သွားနိုင်သောအဘို့ဘုရားသခငျသညျကျေးဇူးတင်ပါသည်"
"Silivri Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဖွင့်လှစ်, 13.59 အပြည့်အဝနာရီအတွက်ကျနော်တို့ပြင်းအား 5.8 ၏ငလျင်လှုပ်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ငါသည်ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်နိုင်ငံသားများငါ့ဆန္ဒကိုတိုးချဲ့အတိတ်အားလုံးİstanbulluရ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သဘာဝဘေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာကိုကျနော်တို့ (DCC) နေစဉ်။ ကျနော်တို့အသက်တာ၏အဘယ်သူမျှမဆုံးရှုံးမှုရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရောက်ရှိလာကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပို့ခြင်းမရှိလေးနက်ဒဏ်ရာ။ ကျနော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှဆက်စပ်အချို့အသိပေးစာလက်ခံရရှိပါပြီ။ အဆိုပါ minaret2၏အထက်ပိုင်း၏ဖြုတ်ချ မှလွဲ. ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖြိုဖျက်အကြောင်းကိုမုဆိုးနှင့်Sarıyerအခြေအမြစ်မရှိကျြ။ ဤရွေ့ကားသတင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်တော်မူ၏။ ငလျင်, သဘောသဘာဝများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်တစ်တကယ်တော့။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ငလျင်လစျြလြူရှုသတ်ဖြတ်, တစ်ဦးတည်းကလူမသတ်ဘူးကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငလျင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမဟုတ်အဆောက်အဦးများအတွက်ရှားပါးမှုအသက်တာ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘုရားသခငျသညျဆီးတား။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်မှအတူတကွကြားဝင်ပါလိမ့်မယ်။ "
"ကျနော်တို့က 20 နှစ်ပေါင်းငလျင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကို teyakkuzd ထက်ပိုကျနော်တို့ထင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာအားလုံးကိုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အန္တရာယ်များအဆောက်အဦးများ၏စိတ်ပျက်ဖွယ်အရေအတွက်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုတစ်ခုမှာကျနော်တို့တာဝန်စတင်ရှိရာဒေသများထံမှမလာပါဘူး။ စည်းရုံးခြင်းပြဿနာကြောင့်အမျိုးသားရေးပြဿနာကြောင်း, ငါတို့ကအစိုးရ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုနှင့်အတူမည်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ, အမြဲအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်စည်ပင်ကထိုင်ပြီးစကားပြောရှိသည်သောဤလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်ဆက်ကြှနျုပျတို့သညျဤဖြစ်စဉ်ကိုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည်ဟုမဆိုလိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ကြှနျုပျတို့သညျဤပြင်ဆင်မှုပြုလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဘေးဥပဒ်ကိုအသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးအလေးအနက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့-bits မှအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစက်အပြောက်အတွက်လျှောက်လွှာကိုသက်ဝင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပွငျဆငျ။ အစ္စတန်ဘူလ်မှာကျနော်တို့ 800 1 လအတွင်းကနောက်ဆုံးမြေကြီးလှုပ်ခြင်း၏သစ်တစ်ခုစုဆောင်းခြင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆင်သင့်နေသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်မရှိကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိ။ ကျနော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်ပြုလိမ့်မည်။ ကရောက်ရှိသည်အထိသူတို့ထဲကအများစုကအစ္စတန်ဘူလ်, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaşရန်, Kadıköy, Üsküdar၏အလယ်ပိုင်းခရိုင်၌ရှိကြ၏။ "
"ကျနော်တို့ကယနေ့ဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်သတိပေးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒီသတိပေးခကျြ, လူမြိုးတစျမြိုးအကဲဖြတ်ရန်mesulüz။ IMM ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်သံသယသင့်ကြောင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူမစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်ကျနော်တို့ DCC အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသတိဝီရိယရှိကြ၏။ ကျနော်တို့က၎င်း၏တခုလုံးကိုကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အဆင်သင့်မတ်တပ်ရပ်မဟုတ်လျှင်သင်İGDAŞİSKİ get get တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားအခွဲများရ။ ငါ၏အဖြစ်ထွန်းမှုအကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းပညာရှင်တွေရဲ့နှင့်အတူတွေ့ဆုံပါလိမ့်မည်ငလျင်စေမည်။ ငါသည်သင်နှင့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ငါခိုင်ခံ့ပြီးနောက်သင်သည်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ "
İmamoğluနေဆဲဒုတိယ DCC ၌သူ၏ကြေညာချက်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုမျှဝေ:
"ကျနော်တို့ကနောက်ကလိုက်မှဆက်လက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသိပညာ, ကျွန်တော်တစ်ဦးဘဝကိုနှစ်သက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိကြပါဘူး။ ထို့အပြင် related လယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏အဖွဲ့များအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အခြေအမြစ်မရှိဖွဲ့စည်းပုံစပ်လျဉ်းအသိပေးစာအချို့ကို။ İSKİနှင့်လယ်ပြင်၌အကြှနျုပျတို့၏အဖွဲ့များİGDAŞ။ SCADA ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ကွင်းအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အဆောက်အဦးများအတွက်ဓာတ်ငွေ့ပယ်ဖြတ်ဖို့အန္တရာယ်များအစီအမံယူပါ။ ကျနော်တို့လက်ခံရရှိအဘယ်သို့သောအကြောင်းအများပြည်သူဖော်ထုတ်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ငါတို့အဘို့အအရေးပါသောသတိပေးသည်။ ငလျင်ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်အစ္စတန်ဘူလ်, သြဂုတ်လ 17 1999, ငလျင်တိုက်ဖျက်ဖို့သံန္နိဌာန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် 20 နှစ်အနီးကပ်ကံမကောင်းတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာအဆင့်အထိမလာနိုင်ကြသည်။ ငလျင်ငါတို့မွို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တစ်အမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့လူတိုင်းသင်ဤကိစ်စတှငျခြေလှမ်းများယူရှိသည်, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း, အတွေးအခေါ်များကို generate အံ့သောငှါစည်းဝေး။ ဗဟိုအစိုးရလူတိုင်း၏တာဝန်ရရန်လိုအပ်နေပါသည်မြူနီစီပယ်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းထွက်ပြေးလာသူနေဧရိယာ။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းကျနော်တို့ကြလိမ့်မည်ကိုစားပွဲ၌လျောင်းကြစကားပြောရန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီ။ "
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကအရမ်းမြန်ဆန်စွာပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်မြေငလျင်ထောက်လှမ်းအစ္စတန်ဘူလ်များအတွက်အသစ်အစုဝေးဧရိယာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အငယ်ဆုံး 500 တကယ်အဓိကချို့ယွင်းချက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ်၏မြေမှတ်တိုင်ကိုစတုရန်းမီတာအတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြင်, သင်အမှန်တကယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်လုံးဝမြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး ပတ်သက်. အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဤကိစ်စတှငျတစ်hazırlığımızရှိသည်။ နောက်တဖန်ချက်ချင်းဘေးဥပဒ်ကို, ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပညာရေးလိုအပ်နေအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကိုပြင်ဆင်စေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်လည်းဤကိစ်စတှငျhazırlığımız။ အတူကျောင်းများ, ရှိသမျှအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရှေ့ဆက်အသိအမြင်ပေါ်မှာငါတို့အလုပ်သွင်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်၏လူများကိုယ်စားပေါ်မှာငါတို့လျှောက်လွှာတစ်ဦးအဆင်သင့်လုပ်မြေငလျင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအဆင်သင့်။ အချိန်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ, ငလျင်အကြောင်းစဉ်းစားစက္ကန့်ဆုံးရှုံးကျနော်တို့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့ရှိသည်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ "
"ကျနော်တို့ကလက်ရှိ akom'd နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ငါဥရောပဘက်ခြမ်း၏ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအားလုံးကိုမြို့မြို့တော်ဝန်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မစ္စတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်းနေကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးကိုအထဲကနေနှင့်AFAD'ınကနေသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကို process ဖို့ကျန်းမာရေးလမ်းအတွက်ကုသမှုပေးနေကြပါတယ်။ IMM နိုးနိုးကြားကြား။ ကျနော်တို့လူတွေကမိုဘိုင်းဘူဖေးပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူချင်းနိုင်ငံသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်မှာစုဝေးရှိရာဒေသများရှိသူတို့နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤပြဿနာအပေါ်အလုပ်မလုပ်ကျွမ်းကျင်သူများက။ ကျနော်တို့ Kandilli အတွက်လေ့လာမှုလည်းရှိကွောငျးကိုကောင်းစွာသိကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိစ္စရပ်များတွင်အများပြည်သူအားအသိပေးပါလိမ့်မယ်။ ငလျင်နှင့်ဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကခေါင်းစဉ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ "
"က Bosphorus တံတားပေါ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးနှင့်တကွကြွလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကားကွပါစို့။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးထိန်းသိမ်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ တစ်ဆိပ်ခံတံတားကိစ္စများဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်ရှိပါသည်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်လျှင်အဖြစ်တစ်ခုမှာပုံဆိပ်ခံတံတားပြသထားတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာ။ ငြမ်းကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်, ငါတို့သည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ မကြာမီကောင်းစွာရယူပါ။ ငါအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဘာသာရပ်မြေငလျင်ဖြေရှင်းဖို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့အခြေခံအကျဆုံးခြေလှမ်းများယူပါလိမ့်မယ်။ အကြီးစားမြေငလျင်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်သဘောသဘာဝ၏ကံကြမ္မာသည်။ ကျနော်တို့ငါအသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်, သူ့ထံမှအစ္စတန်ဘူလ်၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်။ ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတိတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ "
TCDD, ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ငလျင်၏အန္တရာယ် 2013 နှစ်ပေါင်းထံမှမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက်မြေငလျင်သတိပေးမှုစနစ်တည်ဆောက်ကြမည် 24 / 01 / 2012 သူတို့မဝယ်ပြီးနောက်မီးရထားအတွက်ယူဆောင်6အမြင့်မြန်နှုန်းရထားအစုံဟာ့ဒ်ဝဲ detect လုပ်ဖို့ငလျင်သတိပေးစနစ်၏ရှေ့တော်၌မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, အမြင့်မြန်နှုန်းရထားထံမှလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ၏သတင်းထောက်အဆိုအရယင်းစနစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အဆိုပါတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်တူရကီအတွက် installation ကိုအလုပ်, အစောပိုင်းသတိပေး Bremen duracak.kar ရုတ်တရက်ဘရိတ်သတိပေးဖော်ထုတ်မယ်အားဖြင့်အာရုံခံကိရိယာကစေလွှတ်မြေငလျင်, TCDD Eskisehir စတင် အဆိုပါ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း Kandilli ၏အရပျ၌သူသူတို့ကစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ငလျင်သုတေသနအင်စတီကျုနှင့်အတူပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ လေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်သောငလျင်ဇုန်, နှစ်အောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတို့ငလျင်သတိပေးမှုစနစ် Karaman, အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများပြီးစီးများအတွက်လမ်းကြောင်းတည်ထောင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့့သည်က ...
အဆိုပါ Marmaray Bosphorus တံတားဖွင့်လှစ်ကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါတယ် 25 / 10 / 2013 အဆိုပါ Marmaray Bosphorus ၏ဖွင့်ပွဲတံတားကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါတယ်: ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, 29 အောက်တိုဘာလ, အ Marmaray ကို C ၏အဖွင့်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်သုံးစွဲလိမ့်မည်။ Binali Yildirim သမ္မတအဗ္ဗဒူလာဂူးလ်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အားဖြင့်အောက်တိုဘာလ 29 အပေါ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်, အ Marmaray နောက်ဆုံးသောကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲနှင့် Marmaray များ၏စာမေးပွဲနှင့်ဆက်စပ်သောဝန်ကြီး Yildirim ဓာတ်ပုံများဝန်ကြီးဌာန၏သတင်းစာအတိုင်ပင်ခံဖြေရှင်းရန် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ Sirkeci ဘူတာနှင့်ဝန်ကြီး Yildirim ချိုးသောညစာအတွက်သူသည်လုပ်သားများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရိက္ခာ shared ။ ကမျြးစာ၌န်ကြီး Yildirim Cağaloğluဈေးရောင်းလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရေငုပ်သင်္ဘောဥရောပဘက်ခြမ်း၏တင်သောနှင့်အတူအထူးအလင်းရောင်ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ Anatolian ဘက် ...
3 ။ လုပျငနျး Bosphorus တံတားပေါ်ဆက်လက် 23 / 11 / 2013 လုပျငနျး Bosphorus တံတားပေါ်ဆက်လက်:3။ ရှင်းလင်းချက်တံတားငါ၏အဖြစ်ပွားနေသော3yapıldı.yapıရွှေတံခါး၏ခွမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 1 လုပ်ကြံသောအားဖြင့်ထူးဆန်းအဝေးပြေးအတွက် Golden Gate တံတား၏ခွမှာသတင်းထောက်တွေကိုမှတ်ချက်ပေး။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအစ္စမေးလ်လင်းယုန်၏အလယ်ဆီသို့ဦးတည်ယခုနှစ် 2014 တံတား Piers 322 မီတာကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ မေလနှောင်းပိုင်းတွင်, အလုပ်အလျင်အမြန်ရရှိသောလင်းယုန်, "ကျနော်တို့Garipçeကဏ္ဍတွင်ဥရောပဘက်ခြမ်း၏ခွအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိ 84 ။ ကျနော်တို့မီတာ။ ပင်လယ်ကိုဂျင်းဘောင်းဘီ မှစ. , ထို 92 ။ Metred ကျနော်တို့ဖြစ်ကြောင်း။ 29 လျင်မြန်စွာမေလကတည်းကဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်၌အကြှနျုပျတို့၏တံတားများ၏ထင်ပေါ်ဖော်ပြထားစတင်ခဲ့သည် သင်တို့သည်ငါတို့၏ 84 ၏အာရှဘက်မှာတံတား၏မြင့်တက်လာပါတယ်။ ခြေမအမြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ ...
ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများ3။ အဆိုပါ Bosphorus တံတား 26 / 04 / 2014 ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများ3။ အဆိုပါ Bosphorus တံတား: Hasan Kalyoncu တက္ကသိုလ်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကျောင်းသူများ, "လမ်း" ဟုတ်ပါတယ်, ကျောင်းသားများ3။ Bosphorus တံတားဆိုက်ကနေတဆင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခရီးစဉ်ဆနျးစစျဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့သူမစ္စတာ။ လက်ထောက်။ Assoc ။ ဆိုင်းနိုင်းကိုကူညီပါသူ Marmaray လိုင်းခရီးစဉ်၏အတိုင်းအတာဆန်းစစ်နိုင်ကြနေသောကျောင်းသားများကိုမှနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ , ကိုကူညီပါ "3 ။ Bosporus တံတား, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 59 မီတာအကျယ်နှင့်အတူ 1.408 မီတာအဓိက span အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားနှင့်ရထားလမ်း system ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် 320 ကျော်မီတာအမြင့်ကဖြစ်ပါတယ်အတူကမ္ဘာကြီးကိုတစ် drawbridge နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးမျှော်စင်ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ အဆိုပါ Marmaray လိုင်းတည်ဆောက်မှုစာမေးပွဲအပြီးဟောင်ကောင် ...
3 ။ ပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်၎င်း Bosphorus တံတား (- ဓာတ်ပုံပြခန်းဗီဒီယို) ခုနှစ်တွင် 09 / 05 / 2014 နောက်ဆုံးအမှု၌ Bosphorus တံတား: အ Anatolian ခြမ်း Poyrazkoy, ဥရောပဘက်မှာ Yavuz Sultan Selim တံတားGaripçe၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးပေါ်တွင်အလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ တံတားရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပြီးစီးရန်စက်တင်ဘာလခြေမချရသော Xnumx't ။ အတွက်အခိုးအငွေ့ထဲတွင်တံတား၏မြင့်တက်ခြေထောက်ကိုလည်းအဖြစ် 2013 နာရီအခြေခံအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုကသီ၏ဆက်သွယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်Garipçilerအတွက်တံတားဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မေလ 24 Poyrazkoy အတွက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် 2015 မီတာထက်ကျော်လွန်။ ပြီးစီးသည့်အခါကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကာစရာကုလားကာတံတားနှင့်အတူအကျယ်အတွက် 200 မီတာ, အ 59 မီတာမျှော်စင်ကနေxnumx'üncအဆိုပါ Bosphorus တံတား, ရဲတိုက်၏အဓိက span ၏ခေါင်းစဉ်ရှိသည်နှင့်ပါလိမ့်မယ် ...
Izmir တောရိုင်း Park မှာ Carriage မြင်းထံမှဝင်ငွေခွန်
TCDD, ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ငလျင်၏အန္တရာယ် 2013 နှစ်ပေါင်းထံမှမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက်မြေငလျင်သတိပေးမှုစနစ်တည်ဆောက်ကြမည်
အဆိုပါ Marmaray Bosphorus တံတားဖွင့်လှစ်ကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3 ။ လုပျငနျး Bosphorus တံတားပေါ်ဆက်လက်
ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများ3။ အဆိုပါ Bosphorus တံတား
3 ။ ပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်၎င်း Bosphorus တံတား (- ဓာတ်ပုံပြခန်းဗီဒီယို) ခုနှစ်တွင်
အလုပ် Canakkale ရေလက်ကြားဖြတ်ကူးတံတား (ဗီဒီယို) ရက်နေ့တွင်စတင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: alüminotermit၏ပျက်စီးသွားသောလျှပ်စစ်ကို arc ဂဟေ welding အားဖြင့်ပြုပြင်ကြရမည်